အီတလီ မြေမှာ အထူး တိုးတက်ဖို့ လိုအပ် နေတဲ့ အရာ တစ်ခု က ဘာလဲ ဆိုတာ နိုင်ငံခြား လိဂ် တွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြ သွားတဲ့ #ကွန်တီ - SPORTS MYANMAR
အီတလီ မြေမှာ အထူး တိုးတက်ဖို့ လိုအပ် နေတဲ့ အရာ တစ်ခု က ဘာလဲ ဆိုတာ နိုင်ငံခြား လိဂ် တွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြ သွားတဲ့ #ကွန်တီ
အင်တာ မီလန် အသင်း ရဲ့ တိုက်စစ် ကစားသမား သစ် ရိုမီလူ လူကာကူ ဟာ အသင်း သစ်ရဲ့ ဒုတိယ မြောက် ပွဲစဉ် မှာပဲ လူမျိုး ရေး ခွဲခြား ဆက်ဆံ ခံခဲ့ ရတဲ့ နောက် နည်းပြ ဖြစ်သူ အန်တိုနီယို ကွန်တီ က ‘ အီတလီ မြေမှာ ပညာရေး စနစ် တွေ ပိုမို လိုအပ် ကြောင်း ‘ တုန့်ပြန် ပြောကြား သွားခဲ့ လိုက် ပါတယ် ။
အင်တာ မီလန် အသင်း ဟာ မနေ့ ညက ကတ်ဂလီယာရီ အသင်း နဲ့ တစ်ဖက် တစ်ဂိုး စီ သရေ ရလဒ် ထွက်ပေါ် နေတဲ့ အချိန် ပင်နယ်တီ ကန်သွင်း ခွင့် ရရှိ ခဲ့ပြီး အဆိုပါ ပင်နယ်တီ ကို လူကာကူ ကန်သွင်း တော့မယ့် အချိန် ပြိုင်ဖက် အသင်း ရဲ့ ပရိသတ် တွေက ‘ မျောက် ‘ နဲ့ ခိုင်းနှိုင်း ခဲ့ပြီး ဘယ်လ်ဂျီယံ သားကို အာရုံ တွေ ထွေပြား အောင် လုပ်ဆောင် ခဲ့ကြ ပါတယ် ။
အခုလို လူမျိုးရေး ခွဲခြား ခံခဲ့ ရတဲ့ အတွက် ဘယ်လ်ဂျီယံ လက်ရွေးစင် က စိတ်ပျက် ခဲ့တာ အမှန် ပါပဲ ။ သူဟာ ပင်နယ်တီ မကန်ခင် မှာ ပြိုင်ဖက် ပရိသတ် တွေဖက် တစ်ချက် စိုက်ကြည့် ခဲ့သေး ပြီးနောက် ဂိုး ဝင်အောင် ကန်သွင်း သွားနိုင် ခဲ့တာ ပဲ ဖြစ် ပါတယ် ။
ကတ်ဂလီယာရီ အသင်း ရဲ့ ပရိသတ် တွေ ဖက်မှ အခုလို လုပ်ခဲ့ ကြခြင်း က ပထမဆုံး အကြိမ် မဟုတ် ခဲ့ ပါဘူး ။ သူတို့ တွေဟာ လွန် ခဲ့တဲ့ နှစ်တွေ တုန်းက လည်း အိမ်ကွင်း မှာ မွိုက်စ်ကင်း ၊ မက်တွီဒီ ၊ ဆူလီ မွန်တာရီ နဲ့ ဆမ်မြူရယ် အီတူး တို့ကို လူမျိုးရေး ခွဲခြား ထိုးနှက် ခဲ့ဖူး ကြပါ သေးတယ် ။
အဆိုပါ ပွဲစဉ် အပြီး မှာတော့ အင်တာ မီလန် အသင်း ရဲ့ နည်းပြ သစ် ကွန်တီ က သူဟာ ပြိုင်ဖက် အသင်း ရဲ့ ပရိသတ် တွေ အဲ့ဒီ လို အော်ဟစ် ခဲ့ကြ တာကို သတိ မထား မိခဲ့ ပေမယ့် အီတလီ မြေမှာ အဆိုပါ ခေါင်းစဉ် နဲ့ ပတ်သက် လို့ တစ်ကယ် ပဲ ပညာပေးရေး စနစ် တွေ တိုးတက် ကောင်းမွန် ဖို့ လိုအပ် ပြီ ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ဖော် ပြောကြား သွားခဲ့ လိုက် ပါတယ် ။
” တစ်ကယ်ပါ ၊ ကျွန်တော် ခုံတန်း ပေါ်က နေ ဘာမှ တော့ မကြား သိခဲ့ ရ ပါဘူး ။ ဘယ်လို ပဲ ဖြစ်နေ ပါစေ ၊ ယေဘုယျ အရ ပြော ရမယ် ဆိုရင် တော့ အီတလီ မြေမှာ ဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပညာပေး ဖို့ လိုအပ် နေတာ တော့ အမှန် ပါပဲ ။ ဒီ အရာ နဲ့ ပတ်သက် လို့ အန်ဆယ်လော့တီ လည်း တိုင်တန်း ခဲ့ဖူး တာတွေ ကို ကျွန်တော် ကြားသိ ဖူး ပါတယ် ”
” ကျွန်တော် တို့ နိုင်ငံရပ်ခြား သွားရောက် ကြတဲ့ အခါ တွေမှာ လူတွေ က လေးစား သမှု အပြည့် ရှိကြ ပြီး ကိုယ့် အသင်း ကိုပဲ အားပေး ကြဖို့ ပရိသတ် တွေက အထူး လုပ်ဆောင် လေ့ ရှိတက် ကြ ပါတယ် ” လို့ အန်တိုနီယို ကွန်တီ က အီတလီ မြေမှာ တိုးတက်ဖို့ လိုအပ် သေးကြောင်း နှိုင်းယှဉ် ပြောကြား သွားခဲ့ ပါတယ် ။
အင်တာ မီလန် အသင်း ရဲ့ နောက်ခံ ကစားသမား ဖြစ်သူ မီလန် စက္ကရီနဲ့ ကလည်း ပြိုင်ဖက် အသင်း ပရိသတ် တွေဖက် လှည့်ပြီး အခုလို အော်ဟစ် မှုတွေ မလုပ် ကြဖို့ အပြုအမူ တွေနဲ့ ပြသ သွားခဲ့ ပါ သေးတယ် ။
” လူကာကူ ကို လူမျိုးရေး ခွဲခြား ခဲ့ခြင်း လား ? ကျွန်တော် ကွင်းထဲ ရှိနေ စဉ်မှာ ဘောလုံး လောက ထဲ ရှိမနေ သင့်တဲ့ အရာ တွေကို ကြားခဲ့ ရ ပါတယ် ။ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင် တောင် ကတ်ဂလီယာရီ ပရိသတ် တွေကို ပါးစပ် ပိတ် ကြဖို့ ပြောခဲ့ ပါ သေးတယ် ” လို့ ပွဲစဉ် အပြီး သတင်းစာ ရှင်းလင်း ပွဲမှာ ပြောကြား သွားခဲ့ ပါ သေးတယ် ။
အီတလီ မွမှော အထူး တိုးတကျဖို့ လိုအပျ နတေဲ့ အရာ တဈခု က ဘာလဲ ဆိုတာ နိုငျငံခွား လိဂျ တှနေဲ့ နှိုငျးယှဉျပွ သှားတဲ့ #ကှနျတီ
အငျတာ မီလနျ အသငျး ရဲ့ တိုကျစဈ ကစားသမား သဈ ရိုမီလူ လူကာကူ ဟာ အသငျး သဈရဲ့ ဒုတိယ မွောကျ ပှဲစဉျ မှာပဲ လူမြိုး ရေး ခှဲခွား ဆကျဆံ ခံခဲ့ ရတဲ့ နောကျ နညျးပွ ဖွဈသူ အနျတိုနီယို ကှနျတီ က ‘ အီတလီ မွမှော ပညာရေး စနဈ တှေ ပိုမို လိုအပျ ကွောငျး ‘ တုနျ့ပွနျ ပွောကွား သှားခဲ့ လိုကျ ပါတယျ ။
အငျတာ မီလနျ အသငျး ဟာ မနေ့ ညက ကတျဂလီယာရီ အသငျး နဲ့ တဈဖကျ တဈဂိုး စီ သရေ ရလဒျ ထှကျပျေါ နတေဲ့ အခြိနျ ပငျနယျတီ ကနျသှငျး ခှငျ့ ရရှိ ခဲ့ပွီး အဆိုပါ ပငျနယျတီ ကို လူကာကူ ကနျသှငျး တော့မယျ့ အခြိနျ ပွိုငျဖကျ အသငျး ရဲ့ ပရိသတျ တှကေ ‘ မြောကျ ‘ နဲ့ ခိုငျးနှိုငျး ခဲ့ပွီး ဘယျလျဂြီယံ သားကို အာရုံ တှေ ထှပွေား အောငျ လုပျဆောငျ ခဲ့ကွ ပါတယျ ။
အခုလို လူမြိုးရေး ခှဲခွား ခံခဲ့ ရတဲ့ အတှကျ ဘယျလျဂြီယံ လကျရှေးစငျ က စိတျပကျြ ခဲ့တာ အမှနျ ပါပဲ ။ သူဟာ ပငျနယျတီ မကနျခငျ မှာ ပွိုငျဖကျ ပရိသတျ တှဖေကျ တဈခကျြ စိုကျကွညျ့ ခဲ့သေး ပွီးနောကျ ဂိုး ဝငျအောငျ ကနျသှငျး သှားနိုငျ ခဲ့တာ ပဲ ဖွဈ ပါတယျ ။
ကတျဂလီယာရီ အသငျး ရဲ့ ပရိသတျ တှေ ဖကျမှ အခုလို လုပျခဲ့ ကွခွငျး က ပထမဆုံး အကွိမျ မဟုတျ ခဲ့ ပါဘူး ။ သူတို့ တှဟော လှနျ ခဲ့တဲ့ နှဈတှေ တုနျးက လညျး အိမျကှငျး မှာ မှိုကျဈကငျး ၊ မကျတှီဒီ ၊ ဆူလီ မှနျတာရီ နဲ့ ဆမျမွူရယျ အီတူး တို့ကို လူမြိုးရေး ခှဲခွား ထိုးနှကျ ခဲ့ဖူး ကွပါ သေးတယျ ။
အဆိုပါ ပှဲစဉျ အပွီး မှာတော့ အငျတာ မီလနျ အသငျး ရဲ့ နညျးပွ သဈ ကှနျတီ က သူဟာ ပွိုငျဖကျ အသငျး ရဲ့ ပရိသတျ တှေ အဲ့ဒီ လို အျောဟဈ ခဲ့ကွ တာကို သတိ မထား မိခဲ့ ပမေယျ့ အီတလီ မွမှော အဆိုပါ ခေါငျးစဉျ နဲ့ ပတျသကျ လို့ တဈကယျ ပဲ ပညာပေးရေး စနဈ တှေ တိုးတကျ ကောငျးမှနျ ဖို့ လိုအပျ ပွီ ဖွဈကွောငျး ထုတျဖျော ပွောကွား သှားခဲ့ လိုကျ ပါတယျ ။
” တဈကယျပါ ၊ ကြှနျတျော ခုံတနျး ပျေါက နေ ဘာမှ တော့ မကွား သိခဲ့ ရ ပါဘူး ။ ဘယျလို ပဲ ဖွဈနေ ပါစေ ၊ ယဘေုယြ အရ ပွော ရမယျ ဆိုရငျ တော့ အီတလီ မွမှော ဒါနဲ့ ပတျသကျလို့ ပညာပေး ဖို့ လိုအပျ နတော တော့ အမှနျ ပါပဲ ။ ဒီ အရာ နဲ့ ပတျသကျ လို့ အနျဆယျလော့တီ လညျး တိုငျတနျး ခဲ့ဖူး တာတှေ ကို ကြှနျတျော ကွားသိ ဖူး ပါတယျ ”
” ကြှနျတျော တို့ နိုငျငံရပျခွား သှားရောကျ ကွတဲ့ အခါ တှမှော လူတှေ က လေးစား သမှု အပွညျ့ ရှိကွ ပွီး ကိုယျ့ အသငျး ကိုပဲ အားပေး ကွဖို့ ပရိသတျ တှကေ အထူး လုပျဆောငျ လေ့ ရှိတကျ ကွ ပါတယျ ” လို့ အနျတိုနီယို ကှနျတီ က အီတလီ မွမှော တိုးတကျဖို့ လိုအပျ သေးကွောငျး နှိုငျးယှဉျ ပွောကွား သှားခဲ့ ပါတယျ ။
အငျတာ မီလနျ အသငျး ရဲ့ နောကျခံ ကစားသမား ဖွဈသူ မီလနျ စက်ကရီနဲ့ ကလညျး ပွိုငျဖကျ အသငျး ပရိသတျ တှဖေကျ လှညျ့ပွီး အခုလို အျောဟဈ မှုတှေ မလုပျ ကွဖို့ အပွုအမူ တှနေဲ့ ပွသ သှားခဲ့ ပါ သေးတယျ ။
” လူကာကူ ကို လူမြိုးရေး ခှဲခွား ခဲ့ခွငျး လား ? ကြှနျတျော ကှငျးထဲ ရှိနေ စဉျမှာ ဘောလုံး လောက ထဲ ရှိမနေ သငျ့တဲ့ အရာ တှကေို ကွားခဲ့ ရ ပါတယျ ။ ကြှနျတျော ကိုယျတိုငျ တောငျ ကတျဂလီယာရီ ပရိသတျ တှကေို ပါးစပျ ပိတျ ကွဖို့ ပွောခဲ့ ပါ သေးတယျ ” လို့ ပှဲစဉျ အပွီး သတငျးစာ ရှငျးလငျး ပှဲမှာ ပွောကွား သှားခဲ့ ပါ သေးတယျ ။